mhangura zirconium alloy powder, Zr-Cu - Goodao Technology Co., Ltd.
Zirconium mhangura chiwanikwa Zirconium - mhangura chiwanikwa ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo yezvinhu zvekufambidzana wedunhu nekuda kwayo kwakanaka kuitisa uye kupisa kwemagetsi. Kana switch switch ikabvisa dunhu, arc inoguma inoisa mutoro unorema pane izvo zvinhu, zvinova zvinoita yakanyanya-tembiricha chromium. Chromium inogona kuvandudza arc ablative kuramba kwechinhu, uye ine yakanaka fusion kuramba, uye inogona kudzivirira kubatana kweye yakapfava mhangura panguva yekubatanidza fusion. Chromium zvakare ine yakakwira okisijeni philicity, inogona kutora iyo okisijeni yakaburitswa panguva yekuputsa maitiro.
Zirconium mhangura chiwanikwa hachishandiswe chete kune diki chiratidzo transistor kana simba transistor discrete kurongedza, asiwo IC ine yakanakisa kuita, yemhando dzakasiyana dzemutobvu furemu, yakakwira-simba switch, inodzosera uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi. CuZr alloy ine yakanyanya kupisa kuramba uye kudzikamisa kuramba nekuwedzera Zr kune yakachena kuchena mhangura isina oxygen. Naizvozvo, yakwezva kutarisisa kwakawanda senge isiri-yakasarudzika lead furemu yezvinhu nekutora mukana wepamusoro kuita kwemhangura isina oxygen.
Pashure: Tungsten-chromium chiwanikwa, W-Cr
Zvadaro: Zirconium Nickel chiwanikwa, Zr-Ni